Dhammaantood waxay ku bilaabmeen sidii buug buug ah.
Haa, waan dhab ahay Waxaan shaqadayda ka bilaabay webka in ka badan labaatan sano ka hor. Boggeygii ugu horreeyey wuxuu ahaa degel la yiraahdo Caawinta Gacanta oo ka bogsooneysa bogagga ugu wanaagsan ee ka socda hareeraha webka si dadka looga caawiyo kombuyuutarkooda iyo marinnada ilaha internetka. Sannado ka dib waxaan ka iibiyay domain shirkad ka caawisay dadka in ay joojiyaan sigaar cabista, mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay weyn qandaraasyada.
Waxaan bilaabay inaan wax ku qoro barta wax ku qora ee blogger-ka waxaanan ku bartay gabayo ku saabsan wax kasta oo ka socda siyaasadda illaa qalabka Internet-ka. Waxaan ku sugnaa meel walba oo aan inta badan naftayda u qoray - iyada oo aan wax badan dhagaystayaashu jirin. Waxaan ka mid ahaa naadiga buugaagta suuqgeynta ee Indianapolis oo si dhakhso leh uga koray xakamaynta. Waqti kadib, waxaan ogaaday in inbadan iyo in kabadan kooxda ay iiyimaadeen latalin dhanka teknolojiyada ah. Isku darka asalka tikniyoolajiyadeyda iyo ganacsigeyga iyo suuqgeynteyda suuqgeyntu waxay ahayd mid baahi badan loo qabay maaddaama Internetku si deg deg ah isbadal ugu keenay warshadaha.
Akhriska kadib Wadahadal qaawan, Waxaa igu kalifay inaan sifiican u asteeyo oo aan u xakameeyo waxyaabaha ku jira goobta. Waxaan sidoo kale doonayay xakameyn dheeri ah oo ku saabsan muuqaalka iyo dareenka boggeyga, sidaa darteed waxaan u dhaqaaqay degelkeyga, dknewmedia.com, sanadkii 2006 waxaana dhistay degelkeygii ugu horreeyay ee WordPress. Tan iyo markii aan diirada saarey tikniyoolajiyadda suuq geynta, ma aanan dooneynin in magaca magacaygu ku dhex jiro jidka, markaa waxaan u wareejiyey goobta (si xanuun leh) xayndaabkeeda cusub sanadkii 2008 halkaas oo ay ku hanaqaaday tan iyo markaas.
The Martech Zone waxaa iska leh oo ku shaqeeya Highbridge, hay'ad aan bilaabay 2009. Kadib markaan lashaqeystay dhamaanba waaxda suuq geynta weyn ee internetka mudadii aan joogay ExactTarget oo aan bilaabay Isku-darka, Waan ogaa inay jirto baahi weyn oo loo qabo khibradeyda iyo hagitaankey ka dhexjira warshadaha cakiran.
Highbridge waa shirkaddayda shaqsiga ah ee kormeerta qoraaladayda, boodhadhka, aqoon isweydaarsiyada, websaydhyada, iyo gigyada ku hadlaya. Highbridge waa tayda Hay'adda Iskaashiga iibka kaas oo ka caawiya shirkadaha inay sare u qaadaan maalgashigooda alaabada Salesforce iyo Suuq geynta. Waxaan bixinaa is-dhexgal, socdaal, tababar, la-talin istiraatiiji ah, iyo horumarin caadadeed.
Aad baad ugu mahadsantahay taageeradaada sanadaha badan!
The Martech Zone waxaa si sharaf leh u martigeliyay Flywheel ayaa maamushay WordPress martigelinta oo waxaan nahay xulufad.